Community, Health, Lifestyle, Lifestyle, Social Causes
စိတ်ကလေး အနားရရဲ့လား?084
The KaungHtet April 20, 2022 10:32 am April 20, 2022
ကျွန်ုပ်တို့ Shop App MM မှ Mental Health Awareness နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလေးပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
Shop App အား Download ရယူရန်“ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်တာ၀န်တွေ၊ အခက်အခဲ စိတ်ညစ်စရာတွေကြားက ဖြတ်သန်းရုန်းကန်ရင်းစိတ်ရော လူရောပါ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းလာတဲ့အခါ အိပ်စက်အနားယူခြင်း၊ စားသောက်ခြင်း၊ အေးဆေးစွာငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့် အပန်းဖြေကြပေမယ့် ပင်ပန်းနေတဲ့ စိတ်နှလုံးသားလေးကိုရော အနားပေးဖြစ်ရဲ့လား?
ကျွန်ုပ်တို့တွေက အနားယူရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချိန်သိပ်မရတဲ့သူတွေ များပါတယ်။
“အနားမယူချင်ကြဘူး။ အနားယူဖို့မအားဘူး။ အလုပ်တွေများတယ်။ အနားယူလိုက်ရင် ကိုယ်ဟာ Unproductive ဖြစ်သွားမယ်။ သူများထက်နောက်ကျသွားမယ်။ အဲ့တော့ အနားမယူသင့်ဘူး” လို့တွေးတတ်ကြပြီး တစ်လျှောက်လုံး စိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို့ အနားမပေးဘဲ ဆက်တိုက်အလုပ်တွေချည်းဖိလုပ်ခိုင်းတော့တယ်။
လူပင်ပန်းတာနဲ့ စိတ်ပင်ပန်းတာတောင်မတူဘူး။ လူပင်ပန်းတာက တော်သေးတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ညတော့အိပ်ကြတယ်မလား? ညအိပ်တဲ့အခါ တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အနည်းနဲ့အများတော့ Repair ပြန်လုပ်ပေးတယ်။ Recover ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပင်ပန်းနေတာတွေသက်သာအောင် အားဆေးသောက်မယ်။ အားရှိတာတွေစားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်က အားအင်ပြန်ပြည့်သွားတယ်မဟုတ်လား?
Shop App အား Download ရယူရန် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
စိတ်အနားရတယ်ဆိုတာရှားတယ်။ မနက်မိုးလင်း အိပ်ယာနိုးကနေစပြီး အတွေးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်။ မနက်စာ ဘာစားရင်ကောင်းမလဲကနေစလိုက်တာ အလုပ်ထိ ဒီတာ၀န်တွေ ဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်မလဲ စသဖြင့်ဆက်တိုက်တွေးနေရတယ်။ ညအိပ်ရင်တောင် တစ်ခုခုကိုတွေးမိနေတုန်းပဲ။ အဲ့တော့ လူသာအနားရတာ စိတ်ကအနားမရရှာဘူး။
အနားပေးရမယ့် အချိန်ဆို ရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အားဆေးတွေသောက်သလိုပဲ စိတ်ကိုလည်း အားအင်ပြည့်အောင် အစာပြန်ကျွေးရပါတယ်။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် စိတ်ဟာ ပင်ပန်းလာမယ်။ မွန်းကြပ်လာပါမယ်။ စိတ်ကလေးဖျားနာတဲ့အခါ လူပါနေမကောင်းလိုက်ဖြစ်ပြီး Quality of Life ကိုပါထိခိုက်စေလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်နှလုံးသားကိုအနားပေးဖို့ တည်ငြိမ်စေဖို့ ဆိုရင် Mindfulness လို့ခေါ်တဲ့ Practice တွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ Mindful ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
စိတ်ရဲ့အစဥ်ဟာ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာ ရှိမနေတတ်ဘဲ အတိတ်ကို ပြန်တွေးပြီး ပူဆွေးနောင်တတွေရချင်ရနေမယ်။ အနာဂတ်ကိုကြိုတွေးပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေများနေတတ်ပါတယ်။
လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာ နေထိုင်တဲ့အချိန်ဟာ စိတ်အေးချမ်းဆုံးအချိန်၊ အတည်ငြိမ်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ တွေးနေတဲ့အတွေးတွေ ခံစားချက်တွေကို သတိပြုဆင်ခြင်တာ၊ ဘေးပတ်၀န်းကျင်၊ ခံစားမိသမျှ အာရုံငါးပါးကို သတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး ဆင်ခြင်ရှုမြင်တတ်တာဟာ Mindful ဖြစ်တာပါပဲ။
Mindful မဖြစ်ဘူး၊ စိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေနဲ့ ကင်းကွာတတ်တယ်။ တစ်စုံတစ်ခုကို တွေးပူနေရတဲ့ Overthinking တွေ၊ Anxiety တွေကြားမှာ ပိတ်လှောင်နေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဟာ ဆောက်တည်ရာမရနဲ့ကဏာမငြိမ်တွေဖြစ်ပြီး ဘ၀မှာ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Mindfulness ကို အချိန်ပေးပြီး လေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင် စိုးရိမ်သောကတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေ ကင်းဝေးမယ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု အားကောင်းစေမယ်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားကောင်းမယ် စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို တသားတည်းဖြစ်စေပြီးငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်စေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mindful ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ဘယ်လိုကျင့်မလဲဆိုရင် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း (Mindful Breathing) တွေကနေတစ်ဆင့် စတင်လို့ရပါတယ်။ ၀င်သက် ထွက်သက်ကို မှန်မှန်လေးရှူသွင်း ရှူထုတ်လုပ်မယ်။
၀င်လေ ထွက်လေကို သတိထားပြီးမှတ်ကြည့်မယ်။ အဲ့ကနေမှတစ်ဆင့် ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာက ‌ဝေဒနာတွေ၊ စိတ်အစဥ်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ၊ အတွေးတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း သတိထားဆင်ခြင်မယ်။ နေ့စဥ် သွားလာတာ၊ နေထိုင်စားသောက်တာကအစ သတိလေးကပ်ပြီး ဆင်ခြင်ကြည့်မယ်။ အတွေးတွေ တခြားကို ပြန့်သွားတိုင်း လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကို ပြန်ဆွဲခေါ် ပြီး စိတ်ကလေးကို သတိနဲ့ကပ်ကြည့်မယ်ပေါ့။
ဒီလိုလေ့ကျင့်ရင်း လေ့ကျင့်ရင်းကနေမှ တစ်ဆင့် သတိတရားအလွန်အားကောင်းသွားတဲ့အခါ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်အထိ ပေါက်မြောက်အောင် ကျင့်ကြံကြိုးကုတ်သွားလို့ရပါတယ်။
အခုလို အဖက်ဖက်က မွန်းကြပ်ပိတ်လှောင်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ အနားယူလို့ရမယ့် ကမ္ဘာငယ်လေးတစ်ခုကို ဖန်တီးယူတတ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မှာ တာ၀န်ရှိပါတယ်။
စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို ကုစားဖို့၊ ဖျားနာနေတဲ့ စိတ်နှလုံးသားလေးကို ကုစားဖို့၊ ကုန်ခမ်းလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ Energy တွေကို ပြန်လည်ဖြည့်စည်းဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှာပဲ တာ၀န်ရှိပါတယ်။
မိမိကိုယ်မိမိ ချစ်တယ်။ တန်ဖိုးထားလေးစားတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်နှလုံးသားလေးကို ကြင်နာစွာဆက်ဆံဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
အနားယူဖို့ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ အနားယူဖို့မမေ့ပါနဲ့။
အောက်ဖော်ပြပါ မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေဆိုရင်း မိမိရဲ့ စိတ်ကလေးကိုရော အနားပေးဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့ အရာတစ်ခုခုကို ငြင်းဆန်နိုင်ခဲ့လား?
အခုတလော ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေ စားဖြစ်လား?
မိမိရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကောင်းတဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်နဲ့ ဖော်ပြဖြစ်လား?
အကြောက်ဆုံးအရာကဘာလဲ? အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကို ဘယ်လိုကျော်လွှားခဲ့သလဲ?
မိမိရဲ့ စိတ်နဲ့ခန္ဓာကို ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းရင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော နေ့ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Honest Hour စာမျက်နှာမှ ကောက်နုတ်တင်ပြထားပါသည်။
AwarenessDarazDaraz MMMental HealthMindfulnessOnline Shopping AppShop AppShop App MMShop MMစိတ်ကလေး အနားရရဲ့လား
Previous Articleအိမ်တွင်းသင်္ကြန် ကျင်းပမယ်Next Articleမြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းသို့ ခရီးနှင်သည့်အခါ ယူဆောင်သွားသင့်တဲ့ ပစ္စည်း (၁၀) မျိုး